ड्राइभर संग्रह - TipWho
टिपिंग टूर गाईड्स श्रीलंका
टिपिंग टुर गाइडहरू: श्रीलंका संस्करण के तपाईं श्रीलंकाको बिदामा जाँदै हुनुहुन्छ? भ्रमण गर्न, अन्वेषण गर्न, दर्शनीय ठाउँहरू लिन, र स्थानीय श्रीलंकाको खानाको नमूना लिन यो एक सुन्दर देश हो। यदि तपाईं एक भ्रमण गाइड वा एउटा टुर ड्राइभर प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो टिपिंग गाईड तपाईंको लागि हो। […]
दक्षिण अफ्रिकामा टिपिंग तपाईं दक्षिण अफ्रिका भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ? यो निरन्तर भ्रमण गर्न को लागी एक शीर्ष गन्तव्यहरु मध्ये एक मतदान गरिएको छ र यो हाम्रो व्यक्तिगत मनपर्ने मध्ये एक हो। यो टिपिंग गाईडले तपाईंलाई दक्षिण अफ्रिकामा विश्वासको साथ सुझाव दिन सबै जानकारी दिन्छ। धेरै दक्षिण अफ्रिकीहरु सेवा क्षेत्र मा एक जीविका बनाउन […]
फ्रान्समा टिपिंग: के तपाईं फ्रान्समा सल्लाह दिनुहुन्छ?
फ्रान्समा टिपिंग: के तपाईं फ्रान्समा सल्लाह दिनुहुन्छ? गत वर्ष .89.4 .XNUMX।। मिलियन आगन्तुकहरूको साथ फ्रान्स अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको लागि शीर्ष गन्तव्य हो, धेरै जसो उनीहरू पेरिस भ्रमण गर्दैछन्। दुर्भाग्यवस, धेरै आगन्तुकहरू बुझ्दैनन् कि फ्रान्समा कसलाई सल्लाह दिने र यदि उनीहरूले कति टिप्स दिने। यो लेखले तपाईंलाई मद्दत गर्दछ […]